အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း လုပ်ဆောင်ချက်ရောင်းဝယ်ရေး PDF ဇွန်လ 2022 | ယခုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ -2Trade ကိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 2022 ဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်ခြင်း PDF ကို Download လုပ်ပါ။
PDF 2022 ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုပြီးအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအားလုံးသည်ခေတ်မီနည်းပညာညွှန်းကိန်းများနှင့်ခေတ်မီဇယားဖတ်သည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်အချို့သူများသည်ရေတိုကာလတွင်အကျိုးအမြတ်ငယ်များကိုသာအာရုံစူးစိုက်နိုင်သော်လည်းအခြားသူများကမူအနည်းငယ်သောအနာဂတ်ကိုစဉ်းစားလိုကြသည်။
ဤစျေးနှုန်းအရေးယူရောင်းဝယ်ရေး PDF တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိလိုသမျှကို ရှင်းပြပါမည်။ သင်သည် Forex၊ စတော့များ၊ Cryptocurrencies သို့မဟုတ် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် ရှာဖွေနေပါသလား။ ရှေ - ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် သင့်အား စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်ရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ထိုနည်းအားဖြင့် သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကဲ့သို့ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အသိပညာအားလုံးကို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားမည်ဖြစ်သည်။
Price Action Trading ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်မှုသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း breakouts၊ ကုန်သွယ်ရေးအပြောင်းအလဲများနှင့်စျေးနှုန်း၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ ဤသည်ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်။ လက်တွေ့ကျသောသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစျေးနှုန်းကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရုံမျှမက, မဟာဗျူဟာကဖြစ်ပျက်သည့်အတိုင်း - စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်။ စုပေါင်းအမြင်ကြည့်ရှုသည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဖယောင်းတိုင်ဇယားများကိုကြည့်။ မျက်စိနှင့် ပတ်သတ်၍ ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်သည်။
ကုန်သည်တစ်ယောက်အနေဖြင့်၊ သင်အရှုံးကိုစတင်မြင်သောအခါ၊ သင်လုပ်သင့်သည်မှာသင်၏အန္တရာယ်ကိုတက်ကြွစွာထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အနီရောင် (သို့) အစိမ်းရောင်ရှိမရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်စေမသင့်လျော်သောကုန်သွယ်မှုကိုသင်ပိတ်သောအခါဆိုလိုသည်။
ယူဆချက်များသို့မဟုတ်အဓမ္မဆုံးဖြတ်ချက်များမချမိရန်ကြိုးစားပါ။ အရေးကြီးသည်မှာဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ။ နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းများကိုစျေးများမှတစ်ဆင့်၊ ထင်ကြေးမပေးသောအဖွဲ့အစည်းများမှဖြစ်သည်။
သင်၏ငွေကြေးချိတ်ဆက်မှုအပေါ်စျေးကွက်၏ရှုထောင့်သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ စျေးကွက်လုပ်ဆောင်မှုသည်ကမ္ဘာ့အရင်းအနှီးစီးဆင်းမှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ဤဥပမာ၏ဥပမာတစ်ခုမှာကြီးမားသောအမေရိကန်လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ဂျပန်နိုင်ငံမှလက်တော့ပ်များဝယ်ယူခြင်း (JPY) သို့မဟုတ်တစ်လအကုန်တွင်၎င်း၏အစုစုကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ကြီးစွာသောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်သိသာထင်ရှားသောခြေလှမ်းတစ်ခုမှာသင်ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် PDF စျေးဝယ်ကုန်သွယ်မှုဒီစျေးလျှော့ချ, ငါတို့သည်ဤမျှလောက်အသေးစိတ်အတွက်ရှင်းပြလိမ့်မည်။
ရိုးရိုးလေးဆိုရလျှင်စွန့်စားရသည့်သဘောထားသည်ပါဝင်သောဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်၏ခံစားချက်နှင့်အနေအထားကိုပြသည်။ ကုန်သည်များမည်မျှဆုံးရှုံးရန်ဆန္ဒရှိသည်၊ သို့မဟုတ်မည်မျှစွန့်လွှတ်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းညွှန်ပြခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ဝယ်ရန် (သို့) ရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ထားသောအရာကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်သည်အခြေခံအားဖြင့်ကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအနေဖြင့်စွန့်စားလိုသောစွန့်စားမှုအဆင့်ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုအခြေခံအားဖြင့်ဘဏ္marketာရေးစျေးကွက်တစ်ခုလုံး၏တိမ်းညွတ်မှုဖြစ်သည်။
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များ၏စွန့်စားမှုအနေအထားကိုသင်ကိုယ်တိုင်သတိပြုမိခြင်းကသင့်ငွေကြေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ (သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း) နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်ပြင်ဆင်ရန်အလားအလာရှိသောပမာဏပမာဏကိုပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်စေလိမ့်မည်။
အမြဲတမ်းသတိရပါ (စျေးကွက်တွင်) ပွင့်လင်းသောအနေအထားရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်အနီရောင်နှင့်အဆုံးသတ်သွားနိုင်ခြေရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်တစ် ဦး ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဦး တည်လေ့ရှိသည်ဟူသောထင်ရှားသောစိတ်ခံစားမှုနှစ်ခုရှိသည်ဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ယုံကြည်ကြသည်။ မင်းထင်တာက ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည် နှင့် လောဘကြီးခြင်း။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များသည်၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးချနိုင်လိမ့်မည်။
ဘဏ္marketာရေးစျေးကွက်အပေါ်ခြင်္သေ့၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ကာလတိုစိတ်ကိုယူမှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုအလျင်အမြန် ၀ င်ရောက်နိုင်ပြီးအချိန်ကောင်းဖြစ်သည့်အခါမှထွက်ခွာနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထပ်မံ၍ ဤအချက်သည်သင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းစွာနားလည်သင့်သည့်အကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အပြုအမူကိုဖော်ပြပြီး၎င်းတို့သည်လုံခြုံမှုကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှာဖွေရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိသင့်အားပြောပြသည်။
အန္တရာယ်အပေါ် - ကဘာလဲ?
စွန့်စားမှုရှာဖွေနေသည့်စျေးကွက်တစ်ခုကိုဖော်ပြရန် 'risk-on' ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ရှိလျှင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုအကောင်းမြင်ကြလိမ့်မည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် 'အန္တရာယ်ရှိသောပိုင်ဆိုင်မှု' များကိုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ် 'လုံခြုံစိတ်ချရသောပိုင်ဆိုင်မှုများ' ကိုအမှန်တကယ်ရောင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရင်းအနှီးကို 'စွန့်စားသောပိုင်ဆိုင်မှုများ' အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသငျသညျ (စျေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုအဆင့်နှင့်အတူ) 'အန္တရာယ်များ' ၏လက်ငင်းအတွင်းရှိသောအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများထဲမှအနည်းငယ်တွေ့လိမ့်မည်:
ထိုကဲ့သို့သောတောင်အာဖရိက Rand သို့မဟုတ်နယူးဇီလန်ဒေါ်လာအဖြစ်မြင့်မားသောအလျှော့ပေးလိုက်လျောငွေကြေး
သင်စွန့်စားရမှုနိမ့်လေလေပြန်လာလေလေ၊ အန္တရာယ်ပိုများလေ၊ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းတွင်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရှိသည်။
စွန့်စားမှု - ကဘာလဲ
စျေးကွက် 'လုံခြုံမှုရှာရန်' ဖြစ်သည့်အခါဘဏ္financialာရေးမီဒီယာသည်ထိုစကားစုကိုသုံးကောင်းသုံးလိမ့်မည် စွန့်စားရမယ်။ စွန့်စားမှုများသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင်ကုန်သည်များသည်အန္တရာယ်များသောကုန်သွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ 'စွန့်စားရမှု' ၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုမှာစျေးကွက်သည်မတည်ငြိမ်မှုများမြင့်တက်နေသည်နှင့်စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက်ကျဆင်းနေသည့်အခါဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်များသည်စျေးကွက်အပေါ်အကြီးအကျယ်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်ကို 'စွန့်စားမှု' ဖြစ်စေလိမ့်မည်။
စျေးကွက်အပေါ်အကြီးမားဆုံးသက်ရောက်မှုအချို့မှာ COVID-19 ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံနေသောကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှပandိပက္ခနှင့် ၂၀၀၈ ဘဏ္financialာရေးအကျပ်အတည်းတို့ဖြစ်သည်။ မကြာခဏကုန်သည်များသည် 'စွန့်စားမှုကိုရှောင်ရန်' ဖြစ်လာကြပြီးဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်စွန့်စားမှုများယူရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ ဒီဥပမာမှာသူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုရှိပါတယ်။
ကုန်သည်များသည် 'လုံခြုံသောနေရာ' ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်
ကုန်သည်များက 'စွန့်စားနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများ' (ထွက်ရန်ရာထူး) ကိုရောင်းကောင်းရောင်းလိမ့်မည်
အထူးသဖြင့်ကြမ်းတမ်းသည့်ဈေးကွက်သို့လာသောအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် 'လုံခြုံသောနေရာ' ကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ စီးပွားရေးသည်ပိုမိုဆိုးရွားလာပါက၎င်းတို့သည်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိလိမ့်မည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခဲယဉ်းသောပိုက်ဆံပတ်ပတ်လည်ကိုအကောင်းဆုံးလုံခြုံ - ခိုလှုံရာတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်နေသည်။ ဘဏ္fearာရေးဆိုင်ရာကြောက်ရွံ့မှုနှင့်မသေချာမရေရာမှုများကြုံတွေ့ရချိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များသည်အရင်းအနှီးများကို 'လုံခြုံသောပိုင်ဆိုင်မှုများ' အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလေ့ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 'နိမ့်ကျသော' ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်အကျိုးအမြတ်များနည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ယင်းသည်အန္တရာယ်နည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အရင်းခံကိုကာကွယ်ရန်အတွက်စွန့်စားမှုမှရှောင်ရှားရန်ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ များစွာသောလူကဲ့သို့သင်၏ဒေသန္တရငွေကြေးကိုသင်၏ 'ခိုလှုံရာ' အဖြစ်စိတ်မဝင်စားပါကဤတွင်သင်၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အခြားရွေးချယ်စရာများရှိသည်။
အထက်ဖော်ပြပါဘဏ္instrumentsာရေးဆိုင်ရာစာချုပ်များကို 'လုံခြုံသောနေရာများ' အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌ရှိနေပါစေ၊ ဖော်ပြသောကိရိယာများသည်လူတို့၏လိုအပ်ချက်များအမြဲတမ်းလိုအပ်သောတန်ဖိုးကိုအမြဲထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘဏ္spacesာရေးနယ်ပယ်အတွင်းရှိအချို့သူများကကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုကဏ္ sector ရှိစတော့ရှယ်ယာများနှင့်စားသုံးသူများ၏အဓိကကဏ္stocksများသည်ခုခံကာကွယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်ဟုငြင်းခုန်ကြလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါကစတော့ကုန်သည်များအတွက် 'လုံခြုံသောနေရာ' ဟုရည်ညွှန်းကြသည်။
Risk Sentiment သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးရသနည်း။
စွန့်စားမှုစိတ်ဓါတ်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ထားခြင်းသည်မည်သည့်အန္တရာယ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမဆိုစီမံခြင်းဖြင့်သင်၏အရင်းအနှီးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ PDF တန်ဖိုးကုန်သွယ်မှု PDF ၏ဤအပိုင်းသည်စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်ကိုအဓိကထားလိမ့်မည်။ စျေးကွက်တစ်ခုသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုမူနေကြောင်းသင်ကောင်းကောင်းနားလည်ရန်အတွက်သင်သည်စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်ကိုလေ့လာသင့်သည်။ စျေးကွက်များသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှအပြောင်းအလဲများမြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပြီးယင်းတို့အားလုံးသည်စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်တွင်ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
စီးပွားရေးအချက်အလက်များနှင့်နောက်ဆုံးဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသတင်းများကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်မတည်ငြိမ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောဘဏ္panာရေးဆိုင်ရာထိတ်လန့်မှုကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အနေဖြင့်စွန့်စားရသည့်စိတ်ဓာတ်ကိုသင်နားလည်သင့်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံအလျင်အမြန်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်း၊ အခါအားလျော်စွာစျေးကွက်သည်ရက်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်လများစွာအတွက် 'စွန့်စားရမှု' ဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့နောက်အားလုံးသည် 'စွန့်စားမှု' mode သို့ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသည်။
စီးပွားရေးပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ပြီးစျေးကွက်၊ ကဏ္ sector (သို့) စီးပွားရေးဆီသို့ ဦး တည်ကျဆင်းသွားသည့်အခါ၎င်းသည်စွန့်စားရသည့်စိတ်ဓာတ်အပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီးအလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ရလဒ်ဟုယူဆနိုင်သည်။ သတင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ကြီးမားသောခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်တွင်စျေးကွက်သည်ထုတ်ဝေသောအချက်အလက်များကိုလျစ်လျူရှုကာစွန့်စားမှုများမပြုလုပ်ဘဲဆက်လက် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
စျေးကွက်သည် 'စွန့်စားမှု' စနစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များသည်အန္တရာယ်ရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းချနိုင်သော်လည်းလုံခြုံစိတ်ချရသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစွဲကိုင်ထားနိုင်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကသင်၏သိသာထင်ရှားသောအတက်အကျကိုတားဆီးလိမ့်မည်ဖြစ်သောသင်၏စျေးနှုန်းအရေးယူခြင်းကုန်သွယ်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, စျေးနှုန်းများလျင်မြန်စွာနှုန်းမှာကျဆင်းစတင်လိမ့်မည်ဟုအခွင့်အလမ်းလည်းရှိပါတယ်။
ထိုအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော PDF အရောင်းအဝယ်စာစောင်၏နောက်အခန်းသည်စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်ကိုမည်သို့တိုင်းတာနိုင်သည်ကိုကြည့်သည်။
သင်သည် 'စွန့်စားမှု' သို့မဟုတ် 'စွန့်စားမှု' အခြေအနေများရှိမရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည် 'စျေးကွက်ထဲ' တွင်အရောင်းအဝယ်ပြုနေစဉ်အဓိကမက်ထရစ်အချို့အတွက်သတိထားရန်လိုအပ်သည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။ ၎င်းသည်စွန့်စားရသည့်စိတ်နှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်ရန်သူတို့အတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။
S&P 500 (စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ စတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်း)
Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ (DJIA)
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောညွှန်းကိန်းများသည်အမေရိကန်စျေးကွက်တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤအညွှန်းကိန်းများမည်သည့်လမ်းကြောင်းသို့သွားမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာများကိုလေ့လာလိုပါကသင်သည်တစ်နေ့လျှင်ငွေကြေးဆိုင်ရာမီဒီယာများသို့ညှိနှိုင်းနိုင်သည်၊ ဥပမာ CNBC, MarketWatch, Reuters နှင့် Bloomberg ။
သူတို့သည်ငွေအမြောက်အမြားကိုရရှိရန်အတွက်စီမံကိန်းအမျိုးမျိုးသို့မဟုတ်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်အမေရိကန်ဘဏ္Treာရေးဌာနသည်ငွေချေးစာချုပ်များကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ အမေရိကန်အစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်များကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင် T-Bills ဟုခေါ်ကြသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အမေရိကန်ဘဏ္asာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်၊ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ငန်းများကိုရန်ပုံငွေအတွက်အသုံးပြုသောပုံသေ ၀ င်ငွေအမျိုးအစား ၃ မျိုးကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
ဘဏ္notesာရေးမှတ်စုများ: - T-nota ခေါ်။ Fixed-rate အကြွေးလုံခြုံရေးရင့်ကျက်: 1-10 နှစ်။
ဘဏ္bondsာရေးငွေချေးစာချုပ်များ: - T-bonds ။ Fixed-rate အကြွေးလုံခြုံရေးရင့်ကျက်: 10-30 နှစ်) ။
ဘဏ္bာရေးဥပဒေကြမ်းများ - - T- ဥပဒေကြမ်းများခေါ်။ Fixed-rate အကြွေးအာမခံရင့်ကျက်: 1 နှစ်နှင့်အောက်။
ရန်ပုံငွေလည်ပတ်မှုတစ်ခုစီသည် ၄ ​​င်း၏အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်သည့်နည်းဖြင့်ထုတ်ပေးသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းမှသင်ကြည့်သည့်အတိုင်းတစ်ခုချင်းစီတွင်မတူညီသောရင့်ကျက်မှုနှုန်းရှိသည်။ ၎င်းသည်လအနည်းငယ်မှဆယ်စုနှစ်သုံးခုကွာခြားသည်။ အထွက်နှုန်းအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ ဘဏ္mediaာရေးမီဒီယာအစီရင်ခံစာများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေပါ။
အထွက်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားပါကစျေးကွက်အနေဖြင့်အစိုးရ၏ကြွေးမြီများကိုရောင်းချခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဤစွန့်စားမှုကင်းသောပိုင်ဆိုင်မှုကိုရောင်းချခြင်းသည်သူတို့၏ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့်စီးပွားရေးမြင်ကွင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းအကြီးအကျယ်ညွှန်ပြနေကြောင်းသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည် - ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏အထွက်နှုန်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှစွန့်စားမှုများမှ 'စွန့်စားမှု' သို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
PDF အရောင်းအ ၀ ယ်စျေးနှုန်း၏ဤအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတည်ငြိမ်မှုညွှန်းကိန်းကိုလျင်မြန်စွာဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။ အများအားဖြင့် VIX ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့်ဤအညွှန်းသည်စျေးနှုန်းတစ်ခုရုတ်တရက်သို့မဟုတ်မမျှော်လင့်ဘဲပြောင်းလဲမှုနှင့်စျေးကွက်မရေရာမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြည့်သည်။
စွန့်စားရမှုပမာဏကို 'on' သို့မဟုတ် 'off' ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရန်အတွက် VIX ကိုသင် သုံး၍ ကုန်သည်များကမည်မျှစိုးရိမ်နေသည်ကိုခန့်မှန်းရန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အချို့လူများကဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့် VIX ကို 'fear gauge' သို့မဟုတ် 'fear index' ဟုရည်ညွှန်းကြသည်။ ၎င်းသည်ပျံ့နှံ့မှုအရှိဆုံးညွှန်းကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာ S&P 500 သည်စျေးကွက်၏မတည်ငြိမ်မှုကိုရှေ့ဆက်သွားရန်တိုင်းတာနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်:
အကယ်၍ VIX သည်တန်ဖိုး ၃၀ ကျော်ပေးလျှင်၎င်းသည်မတည်ငြိမ်သောအဖြစ်မြင်လိမ့်မည်
အကယ်၍ ဒီဟာအသက် ၂၀ ဒါမှမဟုတ်အောက်ဖြစ်မယ်၊
VIX သည်များလေလေစျေးကွက်အနေဖြင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်လေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် VIX နည်းလေလေစျေးကွက်က ပို၍ သာယာလေလေဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ PDF အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအတူတကွနှင့်ငွေကြေးဖော်ပြရန်လျစ်လျူရှုလို့မရပါဘူး! နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အလျင်အမြန်ရွေ့လျားနေတဲ့ငွေကြေးဘဏ္financialာရေးကဏ္ instruments တစ်ခုဖြစ်တယ်။
Safe Haven ငွေကြေးဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့တိုတိုတုတ်တုတ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းလုံခြုံစိတ်ချရသောဆိပ်ကမ်းသည်မည်သည့်စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်အပြောင်းအလဲကိုမဆိုအလွန်အထိခိုက်မခံသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အလျင်အမြန်တုံ့ပြန်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ငွေကြေးသည်၎င်းတို့၏ကန ဦး တန်ဖိုးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မျှော်လင့်ခြင်းသို့မဟုတ် 'စွန့်စားမှု' မြင်ကွင်းတွင်တန်ဖိုးတိုးလာခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
အဆိုပါ Forex ဈေးကွက် တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ဖွင့်သည်။ အမေရိကန်နှင့်ဆန့်ကျင်သည် စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ် စျေးကွက်စီးပွားရေး၊ Forex ဖြင့်သင်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းစွန့်စားမှုစိတ်ထားကိုအမြဲတမ်းခြေရာခံနိုင်သည်။
အသုံးများသော 'safe haven' ငွေကြေးအချို့ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
အမေရိကန်ဒေါ်လာမည်မျှခိုင်မာသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည် 'စွန့်စားမှု' ခံစားချက်၏ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည်။ ဘဏ္mediaာရေးမီဒီယာနှင့်စီးပွားရေးအချက်အလက်များအရအမေရိကန်ဒေါ်လာသည်အခြားအမြင့်မားသည့်အထွက်နှုန်းရှိသောငွေကြေးများထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်ဟုအစီရင်ခံလျှင်ဈေးကွက်သည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။
များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုလုံခြုံသောခိုလှုံရာအဖြစ်ရှုမြင်ရန်စျေးကွက်သို့ ဦး တည်သွားစေလိမ့်မည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာ၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစုဆောင်းကြသောအခါ USD ၏တန်ဖိုးမြင့်တက်လာသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမေရိကန်ဘဏ္treာရေး ၀ ယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပါက (လုံခြုံသောနေရာတစ်ခုအနေဖြင့်) အကယ်၍ သင်မလုပ်သေးလျှင်သင်ဝယ်ယူရန်အမေရိကန်ဒေါ်လာအချို့ဝယ်ယူရန်လိုလိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။
နှစ်များတစ်လျှောက်ဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းဆွစ်ဇာလန်သည်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးဆွစ်ဖရန့် (ခေါ် CHF) သည်ငွေကြေးအဖြစ်အင်အားများစွာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘဏ္mediaာရေးဆိုင်ရာမီဒီယာများအနေဖြင့်အထွက်နှုန်းကောင်းသည့်ငွေကြေးများသည် CHF ထက်အားနည်းသည်ဟုဆိုပါကဥရောပ၌စျေးကွက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည်ကိုပြသနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသည်စွန့်စားရမှုမရှိသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြသသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများစွာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏လုံခြုံစိတ်ချရသောလက်နက်ကိုကိုင်ဆောင်ထားကြောင်းသိရသည်။ ထို့ကြောင့် CHF သည်“ လုံခြုံသောခိုလှုံရာ” အဖြစ်လူသိများသည်။ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်သောတိုင်းပြည်အဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သတ်မှတ်ထားသော
အကယ်၍ ဘဏ္mediaာရေးသတင်းမီဒီယာများကပိုမိုလျှင်မြန်စွာအလျှော့ပေးလိုက်လျောသောငွေကြေးများသည်ဂျပန်ယန်းထက်အားနည်းသည်ဟုသတင်းပို့လျှင်သတင်း / ဒေတာသည်စျေးကွက်အတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်သတင်းသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်သက်ဆိုင်ပါကစျေးကွက်များသည် JPY အားလုံခြုံသောနေရာအဖြစ်ရှုမြင်ဖွယ်ရှိသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY
AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ.
'risk-on' မဟာဗျူဟာအရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ပတ်သက်လျှင်အထက်ဖော်ပြပါငွေကြေးအတွဲများသည်အလွန်လူကြိုက်များသည် - လျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားပါက 'စွန့်စားမှုမှရှောင်ရှားခြင်း' ၏အချက်ပြဖြစ်နိုင်သည်။
မသေချာမရေရာမှုများနှင့်အတူဤလောကသည်ယခုအချိန်တွင်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် AUD / JPY နှင့် USD / JPY များမြင့်တက်လာပါကစျေးကွက်သည်ယူရို၊ JPY သို့မဟုတ် CHF ဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးကွက်သည်လုံခြုံစိတ်ချရမှုဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ယင်းသည် 'risk-on' mode သို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းကိုညွှန်ပြနေသည်။
ငါ 100% အန္တရာယ် - အခမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်နိုင်ပါသလား?
ကံမကောင်းစွာမရှိ၊ ဤကဲ့သို့သောနဂါးကြီးနှင့်ကြီးမားသောခြေထောက်များကဲ့သို့ပင် ၁၀၀% အန္တရာယ်ကင်းရှင်းသောပိုင်ဆိုင်မှုများမရှိသေးပါ။ မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆိုအမြဲတမ်းလုံခြုံမှုရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါကလုံးဝအန္တရာယ်ကင်းကင်းဖြစ်ရန်အခွင့်အလမ်းများမှာမဖြစ်နိုင်ပါ။
ငွေအစစ်အမှန်ဖြစ်သော (အအေးဒဏ်ပြင်းထန်သောငွေသား) ဥပမာအားဖြင့်သင့်ဝယ်ယူမှုစွမ်းအားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းယိုယွင်းစေသောငွေကြေးဖောင်းပွမှုအန္တရာယ်ရှိနေသေးသည်။ ဒီအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းသမိုင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ 'စွန့်စားမှု' နှင့် 'စွန့်စားမှု' သည်စျေးကွက်၏သရုပ်ဖော်ပုံများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အရာပင်ဖြစ်ပါစေအစဉ်အမြဲတည်ရှိနေလိမ့်မည်။
ဈေးနှုန်းဇယားကို အသုံးပြု၍ စျေးနှုန်း၏လုပ်ဆောင်မှုများ၏ထောက်ခံမှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အနာဂတ်တွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်မည့်အရာများကိုကြိုးစားကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အတွက်အတိတ်၏စျေးနှုန်းကိုလေ့လာသည်။ အရှိန်အဟုန်နှင့်ခုခံနိုင်မှုကိုခန့်မှန်းရန်ဈေးနှုန်းဇယားများကိုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ကုန်သည်များအားမည်သည့်ကုန်သွယ်မှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရန်ကူညီသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေကို အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်မှုမှထွက်ခွာရန်လွယ်ကူစေသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အခြေခံသတ်မှတ်တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာရန်မကြိုးစားသော်လည်းစျေးကွက်ဇယားများနှင့်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများဖြင့်အစက်အပြောက်ပုံစံများကိုပြုလုပ်သည်၊ ထွန်းသစ်စခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများသည်တည်ငြိမ်သောပုံစံကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဈေးကွက်စိတ်ပညာကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်စျေးကွက် ၀ င်များသည်သက်ဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သက်ဆိုင်သောနည်းဖြင့်ပြုမူလေ့ရှိသည်။
နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှစ်ခုလုံးကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်ကြ၏။ အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းအချက်အလက်နှင့်ပမာဏကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ယခင်စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်ချက်များ၏သမိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အနာဂတ်အတွက်ရှေ့သို့မျှော်ကြည့်နိုင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုန်သွယ်မှုအလေ့အထများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုနောင်လာမည့်အဆင့်သို့မှန်ကန်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မည့်အလားအလာကောင်းများရှိသည်။
များသောအားဖြင့်အတိတ်ကာလ၏စျေးနှုန်းပုံစံများသည်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့ကိုထပ်မံပြုလုပ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ လှုပ်ရှားမှုသတင်းအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၎င်းသည် Forex ကုန်သည်များအကြားအလွန်အထောက်အကူပြုသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုအာရုံစိုက်မည့်အစား၊ ပစ္စည်းတစ်ခု၏စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။
စျေးကွက်လမ်းကြောင်းသည်စျေးကွက် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားလိမ့်မည်။
ဤတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ ဦး ဆောင်အယူအဆဖြစ်ပါသည်:
စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်သူများနောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
ကုန်သည်များသည်အတိုး ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်းတိုးခြင်း၊ ကျဆင်းခြင်းရှိမရှိကြည့်နိုင်သည်။
မကြာသေးမီကသင်လေ့လာခဲ့သည့်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများကြောင့် ၀ ယ်သူနှင့်ရောင်းသူများ၏နေရာထိုင်ခင်းကိုပိုမိုနားလည်ရန်သင်ပိုမိုနားလည်နိုင်ပါသည်။
စျေးကွက်ရှိ ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများကြောင့်အတိုးနှုန်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်အစီရင်ခံစာများကိုစျေးနှုန်းအရထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ စျေးကွက်ကအရာရာကိုသိသိသာသာလျှော့ချသည်။ မက်ခရိုစီးပွားရေးအခြေအနေများ (အခြေခံကျကျ) ပင်ငွေကြေးအတွဲ၏ကုန်ကျစရိတ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာ Trend နှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းရွေ့နိုင်မှု။
အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များ နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏:
စာရင်းအင်းများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်မှတသမတ်တည်းအမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်နှင့်စျေးကွက်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောမည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုစောင့်ကြည့်ရန်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သင့်အားစျေးကွက်ထဲ ၀ င်သောအခါနှင့်ထွက်ခွာသောအခါသင့်ကိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကာလနှင့်ပတ်သက်သည်။ စျေးကွက်စတင်ပြောင်းလဲလာသောအခါနည်းပညာဆန်းစစ်မှုကသိလိမ့်မည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်စျေးကွက်၏ဒဏ်ခံနိုင်မှုကိုထောက်ကူသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရန်စျေးနှုန်းဇယားများနှင့် / သို့မဟုတ်အချိန်ဇယားများကိုအသုံးပြုသည်။ စျေးကွက် ဦး တည်ချက်နှင့်ပတ်သက်လျှင်ဤအချက်မှာရွေးချယ်စရာသုံးခုပဲရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
လက်တွေ့တွင်စျေးနှုန်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့် zig-zag ပုံစံဖြင့်ရွေ့လျားသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုသည်ရာထူးနှစ်ခုသာရှိသည်။
အကွာအဝေး: စျေးနှုန်းတွေက zig-zag ပုံစံ၊ ဘေးချင်းကပ်ပါလိမ့်မယ်။
လမ်းကြောင်းသစ်: စျေးနှုန်းများသည် zig-zag ၏မြင့်မားသောနှုန်းနှင့် 'downtrend' တွင်များစွာမြင့်တက်လိမ့်မည်
နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအသုံးပြုသောအဓိကကိရိယာ ၃ ခုမှာ -
ဇယားပုံစံများ - ဈေးကြီးသောဇယားပုံစံများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်စျေးနှုန်းများမည်သည့်နေရာသို့ ဦး တည်သွားမည်ကိုခန့်မှန်းနိုင်ကြသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း: စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်အနေဖြင့်အချက်ပြအရောင်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အားအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုအကောင်းဆုံးနည်းနှင့်ရွေးချယ်နိုင်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ စွန့်စားရမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအသုံးမပြုဘဲကျန်ရှိသောအမြတ်အစွန်းကိုမရနိုင်ပါ။
ဇယားပုံစံများ - ရှင်းပြသည်
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏အခြေခံနိယာမမှာဇယားပုံစံများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကိုမျဉ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးနှင့် / သို့မဟုတ်ခါးဆစ်များ (ဇယားပုံစံ) ကိုအသုံးပြုပြီးသရုပ်ဖော်ပါမည်။ ဤပုံစံများသည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များသည်ဘဏ္assetာရေးပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းနှင့်ကွဲလွဲမှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသောဇယားပုံစံများမှာ -
ဤပုံစံများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်ပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းသည်စျေးနှုန်းမည်သည့်လမ်းကြောင်းသို့သွားနိုင်သည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုအမှန်တကယ်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ဇယားပုံစံအချိန်သည်အလွန်ကွာခြားပြီးစက္ကန့်၊ မိနစ်၊ နာရီ၊ လများပင်လျှင်မူတည်သည်။ ဤပုံစံသည်စျေးကွက်ရှိလူများအပေါ်အာရုံစိုက်မှုအပေါ်မူတည်သည်။
အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောဆက်ဇယားပုံစံသည်တြိဂံများ၊ အလံများနှင့်တံဆိပ်ခတ်များကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ပြောင်းပြန်ဇယားပုံစံများသည်စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုပြောင်းလဲခြင်းမှကုန်သွယ်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။
ထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်စိတ်ဓာတ်နှင့်မျှတသောတန်ဖိုးအဖြစ်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်ကိုပြသသကဲ့သို့, ဒါကြောင့်လည်းပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားတစ်ခုစီစစ်တယ်။ ဇယားပုံစံဆန်းစစ်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအချို့သည်ငွေကြေး၊ စတော့ရှယ်ယာနှင့် cryptocurrencies ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်အခုငါတို့အခြေခံများကိုဖုံးလွှမ်းပြီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းအရေးယူ PDF အရောင်းအဝယ်၏နောက်အပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့ကုန်သွယ်သည့်အခါစိတ်ပညာ၏အရေးပါမှုကိုသွားနေကြသည်။
ဇယားပုံစံများသည်စျေးကွက်စိတ်ပညာအပေါ်များစွာမှီခိုသည်။ ဇယားပုံစံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားသည်လည်းအဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဖိအားများသည်ဇယားပုံစံများကိုဖန်တီးရန်အကူအညီဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်သီအိုရီအရမည်သည့်အချိန်၌သင်ကုန်သွယ်မှုအဆုံးသတ်သည်ကိုလူသားများသည်မည်သည့်အမိန့်ကိုမဆိုရှေ့ဆက်တင်သောကြောင့်မသက်ဆိုင်ပေ။
၄ နာရီဇယားများနှင့်တစ်နေ့တာဇယားများအတွက်ကောင်းသည် လွှဲကုန်သွယ်
၅ မှ ၁၅ မိနစ်ဇယား (intraday ဇယားဟုသိကြသည်) အတွက်အသုံးဝင်သည် နေ့ကုန်သွယ်။
သင်၌ခိုင်မာသည့်အခြေခံမူဘောင်မရှိပါကလေ့လာတွေ့ရှိသည့်စျေးနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ လုံး ၀ ကုန်သွယ်မှုသည်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏စိတ်ခံစားမှုကို အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုတွင်အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအရောင်းအဝယ် - အကောင်းဆုံးပွဲစားများနှင့်ပလက်ဖောင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ PDF action ကုန်သွယ်ခြင်း PDF အဆုံးသတ်ခါနီးပြီဆိုပါကသင်ယခုစျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်မှုကုန်သွယ်မှုသည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်သင့်ပြီဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်မှုသည်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ရေရှည်နှင့်ရေတိုချဉ်းကပ်မှုကဲ့သို့သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အချိန်နှင့်ထိုက်တန်သောဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ပွဲစား ၅ ဦး အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်ပေးမည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ခုချင်းစီကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားခြင်းကြောင့် ၀ င်ငွေနည်းခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများများခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ပွဲစားတစ်ယောက်ချင်းစီကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားခြင်းကြောင့်သင်၏ငွေသည်အမြဲတမ်းလုံခြုံမှုရှိသည်။
၄။ AVATrade - ၂၀% ကြိုဆိုပါတယ်
သင်အမှန်တကယ်ငွေစာရင်းဖွင့်ရန်နှင့်ဘဝစျေးကွက်အတွင်းအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင် AVATrade သည်အလွန်နိမ့်သောပြန့်ပွားမှုများကိုပေးသည်၊ ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်မမျှော်လင့်ပါ။
ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်မှာကြိုဆိုတဲ့အထုပ်ဟာ ၂၀% နဲ့ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ အထိပေးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PDF action ကုန်သွယ်ခြင်း PDF ၏အဆုံးအားဖြင့်၊ သင်သည်စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်မှုကုန်သွယ်မှုသည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းအတိအကျနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းအောင်မြင်မှုရရှိရန်၎င်း၏အရေးပါမှုကိုအခိုင်အမာနားလည်ထားခြင်းကသင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အနာဂတ်။
စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်မှုသည်တစ် ဦး ချင်းငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာများမဟုတ်ဘဲခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်စတော့ရှယ်ယာများ၊ အညွှန်းများ၊ cryptocurrencies၊ Forex သို့မဟုတ်ကုန်စည်များကိုကုန်သွယ်လိုသည်ဖြစ်စေဈေးနှုန်းရောင်းဝယ်မှုသည်သင့်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မဟုတ်ပါ၊ ဈေးနှုန်းရောင်းဝယ်မှုသည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်မတူပါ။ ဒါပေမယ့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကအွန်လိုင်းမှာအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ forms တစ်ခုဖြစ်တယ်။
နာမတော်၏ဖော်ပြချက်အရစွန့်စားမှုများသည်စျေးကွက်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုသိရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်များက (အန္တရာယ်ရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်) ယုံကြည်မှုရှိမရှိ (လုံခြုံသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်) စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်လားဆိုသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
သမိုင်းကြောင်းအရလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာများတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ အမေရိကန်ဘဏ္asာရေး၊ အစိုးရအာမခံ၊ ရွှေနှင့်ဆွစ်ဖရန့်တို့ပါဝင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်မှုကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ရှုမြင်သူနှစ် ဦး အမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤမေးခွန်းသည်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်သည်နှစ် ဦး စလုံးသည်စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်ကိုအခြားနည်းဖြင့်အနက်ဖွင့်နိုင်သည်။